Veroño: kedu ihe ọ bụ, mbido ya, njirimara ya na echiche ya Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 23/09/2021 18:58 | Nkewa
A bịa na ọdịbendị a ma ama na ihu igwe, a na -amụpụta echiche na -atọ ụtọ. Otu n'ime echiche ndị emepụtara n'afọ ndị na -adịbeghị anya bụ nke veroño. Site n'okwu ya ị nwere ike ịhụ ihe ọ pụtara n'ụzọ dị mfe. Ọ bụ oge nke afọ na Septemba na Ọktọba ebe okpomọkụ anaghị adaba na oge ha. Enwere ike ikwu na ọ bụ ngwakọta n'etiti oge ọkọchị na ụbịa.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe veroño bụ, ihe njirimara ya na ebe echiche a bidoro pụta.
1 Gịnị bụ veroño
2 Mmalite nke veroño
3 Echiche ndị a ma ama
4 Ebee ka ọ kacha emetụta?
Gịnị bụ veroño
Ọ bụ echiche e jiri mee ihe n'ọdịnala a na -atụ aka n'ọnwa mmalite nke oge mgbụsị akwụkwọ ebe okpomọkụ anaghị adaba n'oge ahụ. The veroño na -ezute ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke na -eme n'oge mgbụsị akwụkwọ mana yana okpomọkụ dị ka a ga -asị na ọ ka bụ ọkọchị. Ị nwere ike ịnụ ọtụtụ ndị mmadụ n'okporo ámá na -ekwu okwu dị ka "ezigbo oge ọkọchị, hello veroño" ma ọ bụ "anyị ka ga -enwe veroño nwa oge."
Enwere ike ikwu na ọ bụ ngwakọta nke mgbụsị akwụkwọ na ọkọchị wee bụrụ okwu a na -akpọkarị aha ụbọchị ndị a mgbe ọ na -ekpo ọkụ n'ụtụtụ wee malite ịjụ oyi n'ehihie. Otu ihe ị ga -eri nke ọma bụ ogige obodo n'ehihie na mgbede ebe ị nwere ike iri ice cream n'ụsọ osimiri n'ụtụtụ na ehihie. Nke a ka amaara na mbụ oge ọkọchị nke San Miguel nke mere na ngwụsị Septemba na mbido Ọktoba ma na -ezo aka na okpomọkụ dị n'oge ọkọchị n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Mmalite nke veroño
Iji nwaa ịchọpụta mbido echiche a, anyị ga -alaghachi na 2009 na netwọkụ mmekọrịta Twitter. Ọ bụ ebe a ka ọnwa ndị mbụ bidoro ebe oke oyi na -adabaghị na oge nke afọ ebe anyị nọ. N'ime ọtụtụ afọ Echiche a na -abawanye uru ma rute elu ya na 2015. Kemgbe ahụ ewebatala echiche a n'ọtụtụ akụkọ na akụkọ ma na -ejiwanye ya eme ihe n'ọdịbendị a ma ama.
Enwere ike ikwu na ọ bụ ụzọ dị mfe isi kọwaa oge ahụ n'afọ ebe okpomọkụ dị oke njọ karịa ka ọ dị na mbụ. M ga -eburukwa n'uche ọgbọ nke anyị hụrụ onwe anyị na ya. Ndị amụrụ mgbe afọ 2000 gasịrị ha amataghị maka mgbanwe okpomọkụ nke mgbanwe ihu igwe na -ebute, ebe ọ bụ na ha ka dị obere, ha enweghịkwa ndekọ ochie. Ndị dị afọ iri atọ ma ọ bụ karịa maara karịa mgbanwe mgbanwe okpomọkụ nke mgbanwe ihu igwe kpatara.
Anyị maara na okpomoku zuru ụwa ọnụ na -abawanye nkezi okpomọkụ zuru ụwa ọnụ yana oge oyi na -ajụkwa oyi. Nke a na -eme ka oge ọkọchị na -adị ogologo karịa ka ọ na -adị. Agbanyeghị, n'ehihie na n'abalị mgbe anyanwụ dara, ọ na -agbasi ike nke ukwuu iji kpoo ọkụ n'etiti ehihie, anyị nwere ike ịhụ na ọnọdụ okpomọkụ alaghachila etu ha kwesịrị ịdị maka oge anyị nọ n'ime ya.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị na a na -ejikarị okwu a eme ihe site na ọdịbendị a ma ama, achọtabeghị ezigbo ụlọ akwụkwọ Spanish. Achọpụtaghị ya dị ka okwu gọọmentị, n'ihi ya, ọ bụ naanị echiche na -ewu ewu. Ọ bụ ụzọ mara mma dị mfe iji zoo aka n'oge a. Eziokwu ahụ bụ na etinyeghị veroño n'akwụkwọ ọkọwa okwu, apụtaghị na ọ nweghị ike ịbụ n'ọdịnihu. N'ezie, ọtụtụ okwu eji eme n'okporo ụzọ abanyela na akwụkwọ ọkọwa okwu. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ okwu dịka amigovio ma ọ bụ papichulo. Amigovio pụtara onye gị na ya nwere mmekọrịta nke nwere obere nkwa karịa mbedo.
Echiche ndị a ma ama
Ọ dabere na mpaghara ebe i bi na a na -ejikarị echiche ndị a eme ihe ọtụtụ oge ma ọ bụ na -ejighị ya. Echiche ọzọ agụnyere na Royal Spanish Academy bụ nke papichulo. Ọ bụ maka nwoke nke, n'ihi ịma mma ya, bụ ihe nwoke ma ọ bụ nwanyị na -achọ.
Ma ọ bụ na ezigbo agụmakwụkwọ Spanish anaghị eme ka o doo anya nke ọma ihe bụ njirisi achọrọ maka okwu a ga -etinye na listi ahụ. Ọ dị ka ọtụtụ mmadụ na -ekwu maka otu okwu oge niile wee deba aha ya n'akwụkwọ. Nke a adịghị mfe dịka o siri dị. Plenary nke ndị gụrụ akwụkwọ ga -ekwenye ịma ma okwu a dabara ma ọ bụ na ọ baghị uru itinye ya na listi ahụ. Enweela ụfọdụ arụmụka ma a bịa n'okwu gụnyere pepero, culamen na squat.
Ọ bụghị ihe ijuanya na ka oge na -aga, enwere ike itinye echiche nke veroño dị ka okwu gọọmentị.
Ebee ka ọ kacha emetụta?
Mgbe anyị na -ewebata veroño n'ime ndụ anyị, anyị ga -amatarịrị ebe ọ na -eme na ugboro ugboro na ike. Buru n'uche na obodo ukwu na ime obodo nwere oke okpomọkụ dị n'etiti na abalị. A na -enye njupụta ọkụ site na enweghị oke osimiri nke nwere ike ịhazi ọnọdụ okpomọkụ ma mee mgbanwe ya nke ọma. Ya mere, n'ime ụbọchị, anyị nwere ike ịhụ oke okpomọkụ dị elu yana n'abali ọ na -adalata nke ukwuu.
N'aka nke ọzọ, n'obodo ndị ọzọ dị n'ụsọ oké osimiri, ọnụnọ veroño dịtụ nro. Nke ahụ bụ ikwu, Ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ n'etiti ndị nọ n'ehihie na n'ehihie abụghị ihe a na -ahụ anya dabere na oge nke afọ nke anyị nọ na ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ikekwe n'ime obodo, enwere mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ karịa 15 degrees n'etiti ehihie na abalị, na obodo dị n'ụsọ osimiri enwere obere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọdịbendị a ma ama na -emepụta echiche iji nwee ike ịnata ọnọdụ ndị ahụ pụrụ iche nke mmadụ na -enwebeghị ruo ugbu a. Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu ihe veroño bụ na ihe njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Verrano